Version 0.2.7 – Iranian “ntuli aka”
June 19, 2009 site na rịọ 5 Comments
N'ihi ọhụrụ Iranian ntuli aka Google nwekwuru Persian support google ntụgharị, Anyị kpebiri iso uwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ – na ị bụ ugbu a ike gị WordPress saịtị sụgharịrị ka farsi ma ọ bụ site farsi. Dị nnọọ gaa ndutịm interface na gbakwunye a asụsụ, ya na mfe. Ọ dịghị ihe ọzọ bụ ọhụrụ, ma.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: google ntụgharị, obere, ọzọ asụsụ, WordPress ngwa mgbakwunye
July 1, 2009 na 8:12 obi
apụ m n'ezie na-ekele gị maka oké plugin :).
Mgbe ahụ, m dị nnọọ n'okpuru gị a obere ahụhụ m na hụrụ.
Ọ bụrụ na na blog (WP 2.7.1) m kpebiri na m na-egosi a na peeji nke “Nhọrọ -> Reading” na plugin show isiokwu na n'ihu peeji bụghị họrọ page (anyị na-na-enweghị url rewriting).
Ikekwe ị pụrụ tinye ebe ma ọ bụ gị na FAQ karịa ndị ọrụ na-eji PHP ngwa ngwa (http://aciddrop.com/php-speedy/) ga-deactivate ya, tinye “transposh.js” na-eleghara ndepụta, pịa “Ule nhazi” then reactivate it 😉 .
Na m nwere ajụjụ kwa.
M na-anwale Global nsụgharị (http://www.nothing2hide.net/wp-plugins/wordpress-global-translator-plugin/) na ọ na-eji Google Translator engine kwa ma na ọ bụ n'ezie weird, nsụgharị bụ differents…
Gịnị mere akpaka translation abụghị otu mgbe m na-eji gị plugins a ma ọ bụ onye ? The translation si Global translation yiri ka a obere mma karịa gị :$ .
Ma m maa na-ahọrọ na-akwado a free ọrụ yiri ọrụ gị karịa ya “maka” version.
TIA gị azịza(s).
July 1, 2009 na 10:05 obi
Daalụ maka ihe, Aga m tinye a ihe na FAQ.
Banyere dị iche iche na akpaaka translation, ebe ọ bụ na Transposh etịbede ederede n'ime mkpumkpu agba na sụgharịta ndị, kama nke ihe mgbagwoju ihe – translation nwere ike ịbụ a obere dị iche iche, Anyị na-eme atụmatụ nke na-agbakwunye mgbagwoju nke na-ejizi n'ọdịnihu na pụrụ n'ezie mma na a.
Na-atụ anya ihe na-ekwu.
Mohammad hassan na-ekwu,
July 15, 2009 na 11:19 obi
M na-akwanyere gị maka na-agbakwunye Persian ka plugin ha na-ekele gị
Na olileanya nke na-amụba ihe ịga nke ọma
n'ihi na ịsụgharị si farsi ọzọ na-asụ asụsụ pịa na gị ọkọlọtọ na sidebar na ịsụgharị a ikwu
July 16, 2009 na 3:46 obi
m na-eji nke a plugin na-amasị m tinye a nhọrọ tin a plugin
whene a na peeji nke ịsụgharị zuru ezu , tinye na ibe a iji sitmap.xml
July 17, 2009 na 9:59 na
hi m ịwụnye a plgin mgbe 2 ụbọchị na ha ebe show
Total nke 2125 sụgharịrị nkebi ahịrịokwu.
ma ugbu a, mgbe 5day nọmba a bụghị uper na ụfọdụ ederede ịsụgharị
ihe na-donig now ?